Ịbanye na ndị na-eto eto | Mmụta | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Mgbe ị na-etolite, hapụ ma nye nkwado
Netwọk nchekwa maka ọdịda n'efu
Ọ na-adịghị emetụta nne na nna na-adịghị njikere, n'ikpeazụ i nwere ike ka na-echeta ọbụna ha onwe ha na oge nke na-eto eto-na-aghọ, ma ọ na-ele ka ọtụtụ ndị dị ka a free ọdịda - mgbe onye oyokop akpọ ka a nne na nna ka na ya ma ọ dị na-enweghị enyemaka. Ajụjụ bụ ndammana na mmalite oge uto, na ọlaedo afọ nke Lot omission, nke bụ a ezigbo ihe ịma aka ma maka ụmụ, ma ihe ndị ọzọ mere ndị nne na nna.
Ntinye akwukwo bu ihe di mkpa
Ụmụaka na-aghọ ndị na-eto eto ma mesịa ghọọ ndị okenye onwe ha. Ndị nne na nna na-enwe oge siri ike na ya na mmetụta na ezinụlọ na-agbagha anaghị eme ka ihe dị mfe.
Ịnye nwa gị
Gaa na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Mgbe a mụrụ nwa, ọ dịghị onye na-eche na okike ga-ebute ụzọ ndụ ya n'ime ọnwa ole na ole ma lekwasị anya n'ozuzu ya na ịhapụ ịhapụ.
Site na nzọụkwụ mbụ ruo n'ọnụ ụzọ ụlọ akwụkwọ ọta akara - nkewa nke ndị nne na nna na nwa na-abịa na nkwụnye ụgwọ, mana ọ gaghị akwụsị.
Nkebi oge nke mbụ dị iche iche na-abịa n'oge kachasị ọhụrụ site njem njem ọtụtụ ụbọchị na Landschulheim na klas ise. Ọtụtụ ụmụaka na-atụ egwu ya, mana ndị nne na nna na-echegbu onwe ha: Ọ bụ nwa m ka m lebara anya? Gịnị ma ọ bụrụ na ọ na-ewute ma ọ bụ na-arịa ọrịa? Kedu ka ọ ga - esi mee ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na - agba ya mgba na njem?
Egwu niile ndị a na-enye maka ịhapụ ga-abụ, zoo ndị nne na nna nke ọma site na ụmụ ha kama kama inwe obi ike na ntụgharị uche ị nwere ike ime ya! Ọ dị njọ ịgbochi ụmụ gị n'egwu, n'ihi ya, ha na-enye ha ahụmahụ pụrụ iche na pụrụ iche, ohere mmepe na ọtụtụ ntụrụndụ!
Na otu ụbọchị, ọ ga-anọ ebe ahụ! Ọ bụ nwata ka ọ na-ebu ụzọ nwee obere nuances, nwatakịrị na-emegiderịta onwe ya na mberede, ka obere mmụọ ozi ahụ dị nwayọọ nwere ike ghọọ anụ ọhịa mgbe ụfọdụ. Ụmụ nwoke, ma ụmụ agbọghọ, na-ebuwanye ibu na mberede, na-echefu onwe ha na ndị ezinụlọ ọzọ.
Nzọụkwụ a na-afụ ụfụ, ma ọ dị mkpa maka mmepe ahụike. The Circle of Friends na-enweta mmetuta dị ukwuu mgbe ị na-ahapụ ezinụlọ gị. Ihe ndị enyi na-eche maka ịghọ ihe dị mkpa karịa echiche nke ndị mụrụ gị, na ọ dịkarịa ala.
N'ihi na ọ bụrụgodị na ụmụaka anaghị achọ ịnakwere ya, na ịmara na nchebe nke ụlọ bụ ebe dị nchebe ma dị nchebe na-ewusi ha ike. Ndị na-eto eto na-achọ ka nghọta dị ka ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla, ma na-emekarị ihe ịchọ ọdịmma onwe ha nanị na nghọta achọrọ ga-aghọ ọrụ ike maka ndị nne na nna.
Ndị na-eto eto na-alụ ọgụ maka nnwere onwe, ọ bụghị nanị ọdịdị anụ ahụ, dị ka ịkwa ụra ogologo, na-apụ ma na-alaghachi, ma maka nnwere onwe nke echiche nke aka ha, echiche ha na mkpa ha.
Na-ahapụ mgbe ị na-etolite - ma na-anọ n'ebe ahụ maka ụmụaka
Nke a nwere ike ịmalite na uto egwu ma kwụsị n'oge maka Internet.
O doro anya na ọ dịghị mkpa ka ị kwadoro ụmụaka. Iwu nwere ike inyere aka ịmepụta nnwere onwe na ichedo ndị na-eto eto. Ndị nne na nna nwere ike inyere ọtụtụ aka n'oge a: ncheta nke onwe ha Abnabelung.
Kedu ihe ga-aka mma? Kedu ihe ndị mụrụ gị mere nke ọma na nke ziri ezi? Kedu ihe m ga - achọ ime yana ihe ọzọ? Kedu ka m ga - esi gbaa nwa m ume ka o wee ghọọ onye nke ya?
Ndị na-eto eto chọrọ mkpapụ ha na ndị nne na nna kwesịrị iji ụgbụ nchekwa iji jide ụmụ ha na ahụmahụ ọjọọ.
Na nke ikpeazụ ma dị ezigbo mkpa: Ewerela ihe ọbụla na nke a, ọ bụ ihe dị mma ụmụaka na-enupụrụ ndị mụrụ ha, mgbe ahụ ma ugbu a!